မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 319
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ နှစ်ဟောင်းထားရစ်ခဲ့ကာ နှစ်သစ်ကို ကျော်ဖြတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အတွက်၊ အများ ပြည်သူအတွက်၊ မိသားစုအတွက် မည်မျှပေးဆပ်မှုများ ရှိစေကာမူ ယခုနှစ်သစ် 2013 ခုနှစ်အတွက် မည်တွင်မည်မျှ ပေးဆပ်ရဦးမည်ကို ကြိုတင်သတိနှင့် သိရှိဖို့လိုသည်။ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်သည် ယခုပစ္စုပ္ပန်တွင် (တာ)သွားခြင်း (၀ါ) သမိုင်းမှတ်တိုင်ထူခဲ့ ခြင်းတို့ကိုယူခဲ့ ရပြန်သည်။ ထိုသို့သော အတိတ်မှဖြစ်ရပ်များ၊ အတိတ်မှအာဇာနည်ကြီးများ၊ အတိတ်မှပညာရှင်ကြီးများ၊ အတိတ်မှစာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် သဘင်သည်ကြီးများ၊ အတိတ်မှ နိုင်ငံ့အာဇာနည်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေး သမားကြီးများ၏ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြသည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကို ယခုပစ္စုပ္ပန်တွင် အမှတ်တရရှိနေစေရန်၊ ဂုဏ်ပြုပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ယခု Kyaw Thu First Breakout...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် တစ်နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး အများပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေး အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်လျှက်ရှိရာ၌ မြန်မာ့ ရိုးရာ (၁၂) ရာသီပွဲတော်များကိုလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ အသင်းသား/ သူများတို့သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုကာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အားကြိုးမာန်တက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်၍ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဆင်နွှဲကြပေသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီးအား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် (လှည့်လည်)နိုင်ရန် အတွက် ၂၄.၁၁. ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှစတင်ကာ ပဒေသာပင် စီရီခြင်း၊...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ ပြည်မြို့အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားအား ၁၅.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်မြို့ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံး ခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ဆေးရုံအုပ် ကြီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများမှ ဆေးရုံတွင်းတွင် လှူဒါန်းပေးအပ်ထားသည့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ အသုံးပြုထားမှုအား လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်မြို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာတင့်ရွှန်းမှ လှူဒါန်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး “အထူးဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်မိ၍ ပြောရမည့် စကားလုံးများ မေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲသည် ပရဟိတသူရဲကောင်းအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံရလို့ မမေ့နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံ၏အားနည်ချက်၊ အားသာချက်များပြောကြားခဲ့ပြီး ဆေးရုံအား ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်ပြီါ် ကုတင် (၂ဝဝ)ဆံ့...
သန်းဝင်းလှိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့သည် ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘောအဒူယာဒက်ဂ်ျ်၏ (၈၅)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မွေးနေ့အကြို ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် နှစ်ပတ်လည်တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ထုတ်ပြန်၍ အကျဉ်းသား (၂၀၀၀၀)ကျော်ခန့်ကို လွှတ်ပေးရန်လည်း အစီအစဉ်ရှိသည်ဟုသိရှိရသည်။ လက်ရှိထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်သည် ၁၇၈၂ ခုနှစ်မှစတင်၍် ထိုင်းနိုင်ငံကိုစိုးစံခဲ့သော ချက်ကရီ မင်းဆက် ( Chakri Dynasty ) မင်းဆက်၏ နဝမမြောက်ဘုရင်မင်းမြတ် ဖြစ်သည်။သို့သော် ၁၉၃၂ ဇွန် ၂၄ တွင် သွေးမြေမကျတော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီးနောက် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်မှ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ရသည်။ ဘုရင်ဘူမိဘောအဒူယာဒက်ဂ်ျသည် ဆောင်းကုလားမင်းသား မဟီဒိုး( Prince Mahidol of Songkla...
အုန်းနိုင် နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ● ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦးခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးတင်ရွှေ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ရုံးရှေ့ရောက်တော့ တွေ့ရတဲ့လူအုပ်ကို ကျနော်နဲ့အတူပါလာတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်က တအံ့တသြဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ မုံရွာက ကိုတင်ရွှေကြီးကိုပါ တွေ့ရပါတယ်။ သူနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြပါတယ်။ ကိုတင်ရွှေကို မန္တလေးနဲ့ အထက်ဗမာပြည်တာ ၀န်ပေးထားလို့ မကြာခင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကိုတင်ရွှေဟာ အခု အသက် (၅၀) ကျော်ပြီပေါ့။ (နောက်တော့ စစ်အစိုးရလက်ထက် အကျဉ်းထောင်တွင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်) ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ရောက်စ ကိုတင်ရွှေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန် မပျက်ပါ ဘူး။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်လောက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကိုတင်ရွှေနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနှစ်လောက်က ကျောင်းသားအရေးအခင်းတစ်ခုမှာ ပါ ၀င်လှုပ်ရှားခဲ့လို့ တက္ကသိုလ်က ရာသက်ပန်ကျောင်းထုပ်ခံခဲ့ရသူပါ။ နောက်သုံးနှစ်လောက်အကြာ ကျောင်းကပြန်လက်ခံတော့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦးအဖွဲ့ ဝင်...
Page 319 of 336«1...317318319320321...336»